राजनीति साउदी युवराजको स्वागतमा इमरान : आफैंले गाडी चलाए, आफ्नै निवासमा राखे एजेन्सी उनले विमानस्थलबाट आफैंले गाडी चलाएर युवराजलाई प्रधानमन्त्री निवास ल्याइपुर्‍याए। युवराज सलमान आइतबार राति इमरानकै निवासमा बसे। पाकिस्तानमा विदेश पाहुना प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको यो पहिलो पटक हो।
राजनीति बेलायती सेनामा पुरुष जान दिने, महिलालाई किन रोक्ने? सेतोपाटी संवाददाता
वाइड बडी छानबिन आयोगको म्याद सरकारले किन थपेन? सेतोपाटी संवाददाता
बत्ती तयारी गर्दै बौद्धनाथ स्तुपा परिसरमा आइतबार बत्ती बाल्नलाई तयारी गर्दै कामदार। तस्बिरः नारायण महर्जन